Home XAALADAHA FOOTBALLADA EE QARANKA Ciyaartoyda Kubadda Cagta Ingariiska James Maddison Sheeko Waaweyn Xogta Warka Xaddidan
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhameystiran ee kubadda cagta ee loo yaqaan 'Genius' kaas oo si fiican u yaqaan naaneyska "Madder". Maqaalka James Maddison Childhood Story iyo Warqadaha Aan Bixiyeyn Xaqiiqooyinka waxay kuu keenayaan xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la taaban karo laga bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqeyntu waxay ku lug leedahay noloshiisa hore, asalka qoyska, sheekada nolosha ka hor caan, sheekada sumcadda, xiriirka iyo nolosha shakhsi ahaaneed iwm.
Haa, qof walba waa ogyahay inuu ka mid yahay xiddigaha khadka dhexe ee ugu fiican Ingariiska. Si kastaba ha noqotee, qaar yar oo keliya ayaa ka fikiraya James Maddison's Biography oo ah mid xiiso leh. Hadda oo aan ado kale, aan bilaabi.
James Maddison Sheeko dhalasho sheeko dheereeya Xogta loo yaqaan ' Nolosha Hore
James Daniel Maddison wuxuu ku dhashay maalintii 23rd November ee 1996 hooyadiis, Una Maddison iyo aabe, Gary Maddison oo ka tirsan Coventry, England. James wuxuu u dhashay ilma yar oo wiilkiisa u dhalatay waalidkiisa jacaylka ah, Una iyo Gary sawir.
Ka soo horjeeda caqiidada caanka ah, James Maddison wuxuu asal ahaan ka soo jeedaa Jamhuuriyadda Ireland iyada oo loo marayo mid ka mid ah awoowayaashii Irishka ah.
Maddison wuxuu ku koray walaalkiis yar waxaana uu markii hore ahaa asal ka soo jeeda qoyskiisa. Tani waxay aheyd ka hor intaan kubada cagta kubada cagta haysan. Kadibna, ayuu lahaa qoys qoys oo isku dhow kuwaas oo leh taageerayaal badan oo Manchester United ah oo ay ku jiraan James. Hoos waxaa ku qoran cadeyn muuqaal ah oo muujineysa in Maddison uu xiran yahay maaliyada Manchester United isagoo ciyaaraya kubada cagta.
Sida uu ugu dhacay jacaylka ciyaarta:
James Maddison gurigiisa qoyskiisa wuxuu ahaa labo daqiiqo oo kaliya oo laga soo qaaday Xarunta Higgs Centre oo ah xarunta kubada cagta ee Coventry City.
Dhawaan dhawaanshahani wuxuu sababay Maddison dantii joogtada ahayd inuu noqdo xirfadle oo uusan waligiis arkeynin inuu yahay khibrad.
James Maddison Sheeko dhalasho sheeko dheereeya Xogta loo yaqaan ' Hawlaha Hore
Kubada cagta oo aan shaki ku jirin dhalinyarada Maddison oo ka fog doorashooyinka kale ee liita ee kubada cagta ayaa laga yaabo inuu sameeyay ilmo. Wuxuu bilaabay inuu waalidkiisa u qoro arday horudhac ah Academy intii uu ku sugnaa Dugsiga Hoose ee Richard Lee.
Maddison ee sanadihii hore ee akadeemiyadda ayaa ka caawiyay in la dhigo aasaas wanaagsan oo kubada cagta ah taas oo ugu dambeyntii si cad u bixisay saadasheeda. Waxa uu ka mid ahaa ciyaartoyda kale ee caruurnimada kuwaas oo qaatay habeenkii (saacadaha dugsiga kadib) iyagoo ciyaaraya kubadda cagta, ciyaaraha kaliya ee ay jecel yihiin. Hoos waxaa ku qoran shaashadda fiidiyoowga ee Maddison ee tababarka pre-akadeemiyada ee ka dhacay March 2003 2004.
Nolosha Hore ee Dugsiyada Coventry:
Maddison wuxuu ka mid ahaa caruurta yar-yar ee dhaaftay tijaabooyinka akadeemiyada ee ku soo biiray da 'Coventry dhalinyarada da'doodu tahay 9. Tani waxay ahayd wakhti uu waalidku iskuulkiisa bedelay. Maddison waqtigaan ayaa ka soo qayb galay Dugsiga Kaludon Castle.
Nolosha akadeemiyadu waa madadaalo, laakiin Maddison wuxuu lahaa in badan oo ka mid ah allabaryo badan. Wuxuu si deg deg ah uga fuulay wiilkiisa ugu yar uguna fiicnaa ardayga ugu fiican ee da'diisa akadeemigiis. Koritaanka noocan oo kale ah wuxuu keenay shaqo adag oo horseeday abaalmarinta laga helay kaalintiisa ka qaybgalka ciyaaraha tartanka. Eeg caddeynta muuqaalka hoose;
James Maddison Sheeko dhalasho sheeko dheereeya Xogta loo yaqaan ' Waddada Weyn
James Maddison inta lagu guda jiray sanadihii ugu horeeyay wuxuu bilaabay inuu soo bandhigo dareenka dhabta ah ee khadka dhexe iyo kubad sameeyaha kooxda Coventry. In kasta oo uu yaraa, Maddison wuxuu noqday a Show-Boy yaa bixin doona markasta oo loo xilsaaray inuu abuuro himilooyin. Fannaankaasi wuxuu ku soo baxay isaga oo la siiyay joornaalka: 10.
"Maya No: Doorka 10 wuxuu iga caawiyay inaan dhiso shakhsiyadeyda sababtoo ah khadka dhexe ayaa had iyo jeer ka buuxiyay wiilal waaweyn oo xoogan oo khadka dhexe difaaca khadka dhexe ka ciyaarayay. ayuu yiri Maddison.
Hoos waxaa ka muuqda fiidiyooga cadeynaya goolkii hore ee James Maddison iyo qaab ciyaareedkiisa.
Noqoshada Qaadin Jago:
James Maddison sida laga soo xigtay TheGuardian mar horeba qirtay in ay ka mid noqonayso xubno Philippe Coutinho ayaa ah ciyaar isaga u gaar ah. Maddison's No: Doorka 10 wuxuu u arkay isaga oo aan kaliya ku kobcineynin dhibcaha gool dhalinta iyo koobinta koobab. Raadi hoosta, caddayn caddayn video.
James Maddison wuxuu soo gabagabeeyay xirfaddiisa dhalinyarada isagoo ah mid ka mid ah ciyaartoydii ugu fiicnaa uguna fiicnaa ee jiilkiisa Coventry. Madaama uu awood u leeyahay inuu gool dhaliyo islamarkaana uu abuuro himilooyin, waxaa loo shaqaaleysiiyay inuu ciyaaro tartamada Cage Football halkaas oo uu ka sarreeyo filashooyinka sida caadiga ah.
James Maddison Sheeko dhalasho sheeko dheereeya Xogta loo yaqaan ' Kusoo caan bax
Xiddigii 2013-2014 wuxuu arkay Maddison oo lagu daray kooxda koowaad ee Coventry halkaasoo uu sii waday.
Bishii Janaayo 2016, xitaa markii uu ku jiray heerka seddexaad ee kubadda cagta Ingiriiska (League One), Maddison waxa uu si aad ah uga dhex muuqday kooxaha Premier League iyadoo Liverpool ay dooneyso inay soo iibsato. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu dareemay in waqtigu uusan aheyn mid ku habboon inuu ku ciyaaro kubada cagta Ingariiska.
Maddison ayaa go'aansaday inuu u dhaqaaqo Norwich si uu ugu dhawaado qoyskiisa. Bilaha soo socda, qaab ciyaareedkiisa kooxdiisii ​​ayaa arkay inuu ku biirayo England oo ku taal 21 Xiddigaha Maarso 2016.
Ka dib markii 2018 / 2019 ay ku bilowday Leicester iyadoo goolal badan oo Premier League ah uu heysto, tababaraha haatan ee England Gareth Southgate waxaa lagu qasbay inuu u yeero James Maddison oo ay la wadaagto xiddiga Ingriiska ah Jadon Sancho si ay u koox wayn bishii Oktoobar 2018. Munaasabadan cajiibka ah waxay aragtay Maddison riyadiisa ah inuu u ciyaaro waddankiisa mar dambe mala-awaal. Inta kale, sida ay yiraahdaan waa taariikh.
James Maddison Sheeko dhalasho sheeko dheereeya Xogta loo yaqaan ' Nolosha Xiriirka
Saaxiibka qarsoodiga ah ee James Maddison waa mid ka soo baxa indha-indheynta indhaha dadweynaha sababtoo ah noloshiisa jaceylku waa mid aad u khaas ah oo laga yaabo inuu yahay mid aan raaxo lahayn.
Runtu waa, James Maddison ayaa doorbiday inuu diiradda saaro xirfaddiisa isla markaana wuxuu isku dayay inuu ka fogaado waxkasta oo ku saabsan noloshiisa gaarka ah. Xaqiiqadani waxay adkeyneysaa inaan helno xaqiiqda ku saabsan noloshiisa jacaylka iyo taariikhda shukaansiga.
James Maddison Sheeko dhalasho sheeko dheereeya Xogta loo yaqaan ' Naftaada Shaqsiga
Inaad ogaatid James Maddison noloshiisa gaarka ah waxay kaa caawineysaa inaad hesho sawir buuxa oo isaga ah.
Maddison waa qof la yaab leh oo awood leh oo leh maskax furan iyo dareen weyn oo sharaf leh. Jacaylkiisa noloshiisa iyo tan ugu muhiimsan qoyskiisu ma laha xuduud. Tani waxa ay markhaati u tahay dabeecaddiisa ciyaaraha iyo dabeecadda ee dadka uu jecel yahay.
James Maddison Sheeko dhalasho sheeko dheereeya Xogta loo yaqaan ' Nolosha Qoyska
Maddison wuxuu leeyahay shabakad taageero xooggan oo ka timaada asalkiisa hal mar ee asalka ah. Qof kastaa wuxuu ku biiray oo uu ku jiro oo uu ku jiro aabihii uu jecel yahay Gary Maddison sida muuqata muuqaalkiisa da 'yarta hoose.
Inkasta oo uu taageerayay, James wuu ogyahay ugu dambeyntii inuu hoos ugu dhigi karo inuu muujiyo waxa uu sameyn karo garoonka. Inkasta oo uu abuuray xiriir aabe ah oo aabahiis ah oo uu la yeeshay aabihiis isaga oo jooga maxkamada kubadda cagta, Maddison waxaa loo yaqaanaa inuu aad ugu dhow yahay hooyadiis sida uu shaaca ka qaaday boostada warbaahinta bulshada.
Hooyo iyo aabbe labadaba waxay leeyihiin caado u ah in ay daawadaan noloshooda, wiilkooda cayaartooda oo dhan xilli ciyaareed buuxa ah mana rajaynayo in ay safar gasho oo hoos u dhigto dalka maalmaha todobaadyada iyo maalmaha shaqada si ay u daawadaan James inuu sameeyo waxa uu ku fiican yahay garoonka dhexdiisa.
James Maddison Sheeko dhalasho sheeko dheereeya Xogta loo yaqaan ' Xaqiiqooyin aan sax ahayn
James Maddison wuxuu haystaa gacmihiisa oo buuxa oo ka mid ah tattoos kaas oo aan kaliya loo soo jiidin. Dhamaan jilbaha gacanta bidixda ayaa u leh isaga.
Maddison waxa uu sawiray tattoo si uu u muujiyo xaqiiqda ku saabsan qoyskiisa oo leh qeybta ugu weyn ee akhrisa; "Jacaylka qoysku waa duco ugu weyn nolosha. "
Sidoo kale, xilliga gaarka ah ee farsamadani ayaa sidoo kale loo calaamadeeyay sida tattoo ee gacanta. Maalintii uu ku riyoodayay inuu noqdo ciyaaryahan xirfadle ah ayaa ugu danbeyntii yimid run.
James Maddison ayaa marar badan ku dhacay fadeexad isaga ku saabsan, saaxiibadiis iyo kooxo ajnabi ah. Wuxuu mar uun ku faanay nin aan ajnabi ahayn oo ka mid ah mushaharka £ 7,000-toddobaadkii ka hor saaxiibkiisa la weeraray mid ka mid ah ragga si aan u aqoonsan Maddison sida caan ah. Markii la weydiisto in uu ka sheekeeyo dhacdada, mid ka mid ah dhibanayaasha ayaa yiri;
"Waxa uu sheegay in uu helo £ 7,000 todobaadkii. Waxa uu sheegay in uu wax badan helo bil gudaheed intii aan samayno sannad gudihiis. Ma weydiin waxa aan sameeyay. Wuxuu sheegay in kabaha uu ka qiimeeyay wax ka badan lacagteena. "
Hantida FACT: Waad ku mahadsantahay akhrinta Akhriskayaga James Maddison ee Caruurnimada iyo Xaqiiqooyinka Aan Laheyn. At LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan sax ahayn, fadlan nala wadaag adigoo faallo ka bixinaya hoos. Had iyo jeer waanu qiimeynna oo ixtiraamnaa fikradahaaga.
Jordan Pickford Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha